विश्वभर अञ्जलीको चर्चा, कुन मिडियाले के लेखे ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
विश्वभर अञ्जलीको चर्चा, कुन मिडियाले के लेखे ?
१७ मंसिर, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एशियाली खेल (साग) अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा नेपालले गज्जबको जित हात पा¥यो । नेपालविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गरेको माल्दिभ्सले जम्मा १६ रन मात्र बनाएको थियो ।
टी–२० खेलमा माल्दिभ्सलाई १६ रनमा समेट्नको लागि नेपालको तर्फबाट अञ्जली चन्दले गज्जबको बलिङ गरिन् । उनले १ रन पनि नदिई ६ विकेट लिइन् । उनको यो प्रस्तुति अहिले विश्वकीर्तिमान कायम गरेको छ । उनको चर्चा अहिले नेपालमा मात्र होइन भारत, बेलायत लगायत विश्वभर भइरहेको छ ।
अञ्जली विश्वरेकर्डको विषयमा टी–ट्वान्टी वर्ल्ड कपको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलले समेत नेपालको प्रस्तुतीको प्रशंसा गरेको छ । उनको बारेमा भारतीय टेलिभिजन आजतकको अनलाइन संस्करणले ‘यी महिला बलरले तोडिन् सबैको रेकर्ड, बिना रन लिइन् ६ विकेट’ शीर्षक दिएर समाचार लेखेको छ ।
भारतकै पत्रिका दैनिकभास्करले अञ्जलीको बारेमा लेखेको समाचारको शीर्षकमा भनेको छ, ‘नेपालकी अञ्जलीले १३ बलमा बिना रन दिएर ७ विकेट लिइन्, मलेसियाली बलरको रेकडए तोडिन् ।’
त्यसैगरी विश्वव्यापी समाचारको लागि चर्चित बीबीसीको मुख्य प्रकाशनले पनि अञ्जलीको समाचारलाई स्थान दिएको छ । ‘बिना रन ६ विकेट, नेपालकी अञ्जली चन्दको नयाँ टी–ट्वान्टी रेकर्ड’ शीर्षकमा बीबीसीले अञ्जलीको तारिफ गरेको छ ।
यी लगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले पनि अञ्जलीको विश्वकीर्तिमानको विषयमा लेखेका छन् । अञ्जलीले मलेसियाली खेलाडीको रेकर्ड तोडेकी हुन् । मलेसियाका खेलाडी मास ऐलिसाले गत जनवरीमा चीनविरुद्धको खेलमा ३ रन दिएर ६ विकेट लिएका थिए ।
Previousसाग महिला भलिबल फाइनलः भारतविरुद्ध जितनजिकै पुगेर हार्यो नेपाल
Nextछुट्टी मनाउन गएकी महिलामाथि होटलकै ५ स्टाफद्वारा सामुहिक बलात्कार